Orinasa famokarana fanafody | Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovam-panafody China
Amin'ny maha ivon-toerana R&D nasionaly fananganana famonoana otrikaina sy fanamorana azy, ny SHINVA no singa famolavolana lehibe indrindra ho an'ny fenitra nasionaly sy indostrialy ho an'ny fitaovana fanamorana. Ankehitriny SHINVA no tobim-pamokarana lehibe indrindra amin'ny sterilization sy desinfection fitaovana eto amin'izao tontolo izao. SHINVA dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana sambo ISO9001, CE, ASME ary tsindry.
PSMR Series Sterilizer rano mafana be
Entana azo atao: Manokana ho an'ny sandan'ny fandidiana robot.
Andalana RXY Series Form-Fill-Seal
Ny tsipika tsy feno pvc-form-fill-tombo-kase (FFS Line) dia misy ny fizarana kitapo, ny gara famenoana famehezana, ny kabinetra fanaraha-maso ary ny saron-kazo laminar nanidina. Masinina tsy feno pv form-Fill-Seal. Toy izao ny tabilao mikoriana: Fanontam-pirinty amin'ny sarimihetsika → Famoronana kitapo → Fanamafisana ny seranan-tsambo → Famindrana kitapo → famenoana → Famehezana kitapo → Fividianana kitapo
ECOJET Series Injection mould & rafitra mitsoka
Ny masinina dia ampiasaina amin'ny fanaovana ny tavoahangy poakaty avy amin'ny granule PP. Anisan'izany ny milina fanefena tsindrona sy ny milina mitsoka tavoahangy.
Masinina SSL Series Wash-Fill-Seal
Ny milina dia ampiasaina amin'ny fanasana, famenoana ary famehezana ny fampidirana tavoahangy PP. Izy io dia mety amin'ny famehezana mafana ny satroka mitambatra, ao anatin'izany ny singa fanasan-drivotra amin'ny rivotra, ny fanasan-damba WFI, ny famenoana tsindry mandritra ny fotoana fohy, ny fitomboka.
PSMP Series Sterilizer rano mafana be
Rafitra GP Series Automation
Ny rafitra mandeha ho azy dia ampifandraisina amin'ny fitaterana mandeha ho azy sy ny famoahana mandeha ho azy ho an'ny karazana fampidiran-dresaka, fitaterana mandeha ho azy ary famoahana mandeha ho azy aorian'ny fanamoriana, izay taranaka farany fampitaovana fanafody.
Masinina PBM Series BFS
Ny masinina tavoahangy plastika mametaka fantsom-panazavana dia mandray ny teknolojia tafiditra ao anaty (aorian'izay BFS), izay fizotry ny famokarana fampidirana fonosana plastika. Ny milina fameno aseptika telo-in-iray dia be mpampiasa amin'ny famokarana vokatra fonosana plastika ho an'ny sterilization terminal, vokatra aseptika, sns. Tsy mety amin'ny famokarana vokatra marobe fotsiny izy io, fa koa manana fitoniana aseptika tsara, mety ho latsa-danja amin'ny hazo fijaliana , vidin'ny famokarana sy fitantanana ambany.
Rafitra GR Series Automation
Rafitra BZ Series Automatic Package
Ny rafitra fonosana mandeha ho azy dia ampidirina amin'ny fizahana hazavana mandeha ho azy, ny cartoning automatique ary ny palletizing automatique amin'ny karazana fampidiran-tsakafo, izay taranaka farany fampitaovana fanafody. Ny fampiharana an'ity rafitra ity dia tsy mampihena be fotsiny ny habetsahan'ny mpiasa hampihenana ny hamafin'ny asa, fa koa hanatsara ny haavon'ny automatique ny fitaovana famokarana vahaolana IV hanatsarana ny endrik'ilay orinasa mpamokatra fanafody.